alaabada | Shijiazhuang Neming Soo Dejinta & Dhoofinta Co., Ltd.
Xirashada isboortiga waxaa loogu talagalay inay bixiso qiimo jaban oo raaxo leh oo loogu talagalay cayaaraha iyo xiisaha cayaaraha. Waxay ka samaysan yihiin waxqabad sare & qalab waara.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo dhar ah, sida suufka, suufka / poly / spandex, polyester, viscose, nylon iwm Codsi kala duwan, dharka waxaa lagu daaweeyaa hawlo kala duwan, sida jiqis iyo qalayl dhakhso leh, ka hortagga UV, anti-UV , ur diid iwm
Filo dharka shaqeynaya, waxaa kale oo jira daabacaadyo kala duwan, daabacaadda xarkaha, daabacaadda dhijitaalka ah, daabacaadda silikoonka, xayeysiinta, daabacaadda wareejinta kuleylka si adiga iyo naadigaaguba aad u kala duwanaataan.
Xirashada isboortiga waxaa ka mid ah: Jaraajyada, Shaatiyada Tee, Shirt Polo, Dusha & Gaagaaban, Surwaal, Suut Training, Joggers, Bibs iwm gabi ahaanba waa la habeeyay.
Waxaan ku siineynaa noocyo farabadan oo firaaqo ah funaanado, funaanado Polo ah, dhidid dhudhun, hoodies iwm. Waxaad heli doontaa waayo-aragnimo xirasho iyo nasasho leh oo nasasho ah waqtiyada aan shaqeynin.
Macno malahan inaad la joogto reerkaaga ama waxqabadyada banaanka ka baxsan, waxaad naga heli kartaa dhar kugu habboon. Adeeggeena ku-meel-gaarka ah waxaa ka mid ah qaababka, cabirka, waxyaabaha ka kooban dharka & midabada, astaanta iwm wax kasta oo aad u baahato, waan kuu sameyn doonnaa. Waxaan ku siin doonnaa dharka kugu dhejisan oo kaa dhigaya mid gaar ah.
Annagu kaliya ma soo saarayno dharka, waxaannu kuu daryeeli doonnaa more
Waxaan bixinaa xulasho aad u tiro badan oo ah dharka shaqada, sida funaanado, funaanado polo ah, labis, Jaakadaha badbaadada. Waxay ka soo baxeen dhar joogto ah, neefsan kara & gaar ah si ay u siiyaan ilaalinta maalinta oo dhan inta aad shaqooyinkaaga ku jirto. Dharkeena shaqada ayaa si istaraatiijiyad leh loogu soo saaray dhammaan xaaladaha shaqada, saldhig ahaan lakab, jaakad dhexe ama kore ah.
Dharkeenna bannaanka ah waxaa laga sameeyaa waxyaabo fiican oo shaqeynaya oo raaxo leh. Waxay kaa ilaalin doontaa lagana heli doonaa waxqabadkaaga banaanka xaalad kastoo cimilo ah.
Waxay ku timaadaa dharka barafka, dharka roobka, dabaysha, jaakadaha dhogorta, jaakadaha jilicsan, jaakad jilicsan. Iyagu waa xulasho wanaagsan oo loogu tala-galay socodka subaxdii, kalluumeysiga, ugaadhsiga, barafka, caadi, xero, fuulitaanka iwm.